အသုံးပြုသူ ဆွေးနွေးချက်:RMaung (WMF) - ဝီကီပီးဒီးယား
အသုံးပြုသူ ဆွေးနွေးချက်:RMaung (WMF)
၁ Test Message!
၂ Test Message!
၃ Test Message!
၄ Test Message!
၅ Community Insights Survey
၆ Reminder: Community Insights Survey
Test MediaWiki message delivery (ဆွေးနွေး) ၁၅:၂၉၊ ၆ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၉ (UTC)
test MediaWiki message delivery (ဆွေးနွေး) ၁၆:၅၂၊ ၉ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၉ (UTC)
၁၅:၄၇၊ ၁၀ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၉ (UTC)
RMaung (WMF) ၁၆:၀၉၊ ၁၀ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၉ (UTC)
RMaung (WMF) ၁၆:၁၈၊ ၁၀ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၉ (UTC)
RMaung (WMF) ၁၄:၂၆၊ ၂၀ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၉ (UTC)
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=အသုံးပြုသူ_ဆွေးနွေးချက်:RMaung_(WMF)&oldid=478652" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၀ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၉၊ ၁၄:၂၆ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။